I-Microsoft Ikhipha i-Outlook 2007 FAQ kabusha: Ukuxhaswa kwe-HTML | Martech Zone
IMicrosoft Office Outlook 2007
Ukunikezwa kwesithombe se-FAQ? kubuyekezwe 2/15/07
Ezinguqulweni ezedlule, i-Outlook isebenzise izinjini ezimbili zokunikezela? I-Internet Explorer yokufunda okuqukethwe, ne-Microsoft Word yokuhlela ngenkathi ubhala imiyalezo. Lokhu bekusho ukuthi uma ubephendula noma udlulisa ama-imeyili e-HTML, izinhlobo zangaphambilini ze-Outlook zizoqala zisebenzise injini yokunikezela ye-IE ukuyibuka, kuzodingeka ukuthi idlulele enjini yokubhala (iZwi).
Sifunde ukuthi lokhu bekungewona umuzwa ofanele kumakhasimende, njengoba imvamisa okuqukethwe abantu abakudalile kubukeka kwehlukile kumamukeli okuthola? njengokufometha kuzovalwa kancane, noma izinto bezingeke zivele njengoba zazinjalo ngenkathi umyalezo ukufakwa? imodi. Sizwe amakhasimende efuna ukusebenza kwamathuluzi wokuhlela acebile abawasebenzisa ku-Microsoft Word. Ngendlela ubuchwepheshe be-Internet Explorer nobuchwepheshe besiphequluli obabuyiyo, zazingakaze zenzelwe ukuba abahleli bombhalo.
Ekuthuthukiseni iMicrosoft Word 2007, ithimba lezentuthuko lenze intuthuko ethile ekusingatheni okuqukethwe kwe-HTML, ngokuya ngamazinga we-HTML ne-CSS. Ngokuya ngalokhu kuthuthukiswa, ithimba le-Outlook lenze isinqumo sokuhlanganisa injini yokunikezela nokuhlela ngokusebenzisa injini ye-Word, inikeze abasebenzisi isipiliyoni sokuhlela esiphakeme.
I-Q & A:
U. Yini ukulungiswa? Ngabe lokhu akukwenzi kube nzima kubakhi beWebhu ukudala imilayezo ye-imeyili ye-HTML ?? futhi kube nzima kubasebenzisi be-Outlook ukuthola imiyalezo eklanywe kahle?
Yize kunezici ezithile ze-HTML ne-CSS ezingasekelwa okwamanje yinjini yokunikezela ye-Word, amakhono amakhasimende ethu awadingayo kakhulu ezincwadini zawo ze-HTML asekelwa yi-Outlook 2007. http://msdn2.microsoft.com/en?us/library/aa338201.aspx futhi http://msdn2.microsoft.com/en?us/library/aa338200.aspx ukuthola imininingwane ngamazinga we-HMTL ne-CSS.
U. Kungani iMicrosoft ingasebenzisi amazinga afanayo we-Outlook 2007 njengaku-Internet Explorer 7?
A. Amakhasimende asebenzisa i-Outlook awafuni nje ukubonisa okuqukethwe kwe-HTML, ngendlela abenza ngayo kusiphequluli sabo, kodwa futhi banethemba lokuthi bazokwazi ukubhala lokho okuqukethwe futhi. Sizwile kumakhasimende ukuthi bafuna ukunotha kokuhlangenwe nakho kokuhlela ababekujwayele kusuka ku-Word kuhlanganiswe kuyo yonke i-Outlook. Ngenkathi i-IE7 yinhle, yayingakaze ihloselwe ukuba ithuluzi lokuhlela. Kungakho sithathe isinqumo sokusebenzisa injini entsha yokunikezela nge-HTML yeWord kokufunda nokubhala okuqukethwe, okwenziwe ngcono ngokususelwa kumazinga we-HTML ne-CSS. Lokhu kusivumele ukuhlanganisa izinjini zokunikezela nokuhlela ndawonye, ​​kunokuphoqa amakhasimende asebenzisa i-Outlook ukuthi isebenzise izinjini ezimbili ezihlukile (enye yokunikeza i-HTML, enye ukuhlela).
U. Ingabe zikhona izinhlelo zokwengeza ukusekelwa kwamanye amazinga we-HTML ne-CSS kunjini ye-Word?
A. IMicrosoft ihlola ngokuqhubekayo ukwesekwa kwe-HTML ne-CSS ngokuya ngempendulo yamakhasimende
U. Ngingalutholaphi ulwazi oluthe xaxa ngemikhuba ehamba phambili yokulethwa kwe-imeyili?
A. Vakashela www.microsoft.com/postmaster ukuthola imininingwane kuyo yonke imikhiqizo nezinsizakalo kufaka phakathi iWindows Live Hotmail neWindows Live Mail.
Umthombo: The ESP Ngisebenzela ukuthola lolu lwazi namuhla nge ESP Coalition
Ngimi nge umbono. Kuyabizwa i-HTML imeyili, hhayi IMicrosoft Word Mail.
Tags: i-imeyili htmlhtml imeyilihtml ukwesekwa-MicrosoftumbonoI-Outlook 2007
Imiyalo eyi-10 yokuThuthukiswa kweWebhu yanamuhla